21 n'ime elu ahịa ahịa US 25 kacha elu na ịda mba ma ọ bụ nlaazu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » 21 n'ime elu ahịa ahịa US 25 kacha elu na ịda mba ma ọ bụ nlaazu
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ahịa ụlọ oriri na ọ Urụ hotelụ nke obodo ndị mepere emepe, nke na-adabere kpamkpam na azụmaahịa sitere na ihe omume na nzukọ otu, na-aga n'ihu na-enwe nsogbu akụ na ụba siri ike ebe ọ bụ na ọrịa a emetụtala n'ụzọ na-ezighi ezi.
Obodo mmepe obodo ka na a "ịda mbà n'obi" okirikiri mgbe n'ozuzu US nkwari akụ ụlọ ọrụ na-anọgide na a "nlaazu".
Njem azụmahịa agbadata ma atụghị anya ịlaghachi na ọkwa 2019 ruo mgbe opekata mpe 2023 ma ọ bụ 2024.
Elslọ oriri na ọ areụ seụ bụ naanị akụkụ nke ile ọbịa na ụlọ ọrụ ntụrụndụ na-anatataghị enyemaka ọ bụla n'agbanyeghị na ha so na nsogbu kacha sie ike.
N'agbanyeghị na njem na-atọ ọchị, akụkọ ọhụrụ na-egosi na ụzọ mgbake maka ụlọ ọrụ nkwari akụ dị ogologo na 21 nke 25 kacha elu. US ụlọ ahịa nkwari akụ fọdụrụ na ndagide ma ọ bụ nlaazu. Ọhụrụ data na-egosi obodo ndị mepere emepe hotels ka na a "ịda mbà n'obi" okirikiri mgbe n'ozuzu US nkwari akụ ụlọ ọrụ na-anọgide na a "nlaazu."
Ahịa obodo, nke na-adabere na azụmaahịa sitere na ihe omume na nzukọ otu, na-aga n'ihu na-enwe nsogbu akụ na ụba siri ike ebe ọ bụ na ọrịa a na-agbasa n'ụzọ na-ezighi ezi. Hotelslọ nkwari akụ nke obodo mebiri 52% na ego ụlọ na May ma e jiri ya tụnyere May 2019. Dịka ọmụmaatụ, New York City, nke na-anọgide na-ada mbà, ahụla otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ime ụlọ nkwari akụ ya (ime ụlọ 42,030) nke ọrịa COVID-19 kpochapụrụ , na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ nkwari akụ 200 na-emechi n’obodo ahụ.
Ntughari ohuru na oge ezumike maka oge ezumike na-agba ume maka ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ, mana azụmahịa na njem otu, isi iyi kachasị nke ụlọ ọrụ ahụ, ga-ewe ogologo oge iji weghachite. Njem azụmahịa agbadata ma atụghị anya ịlaghachi na ọkwa 2019 ruo mgbe opekata mpe 2023 ma ọ bụ 2024. Emebela nnukwu mmemme, mgbakọ na nzukọ azụmaahịa ruo oge opekata mpe 2022.
Nkwupụta ahụ na-egosi mbibi akụ na ụba ka na-eche ihu ahịa ụlọ nkwari akụ ma gosipụta mkpa ọ dị maka enyemaka enyemaka ezubere iche maka Congress maka ụlọ ọrụ na-arịa ọrịa.
"Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-amalite ịlọghachi dị ka mgbochi COVID-19 na-adị mfe na mba ahụ dum, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ụlọ oriri na ọ USụ USụ nke United States ka na-ada mbà, yana ahịa kachasị njọ na ịda mbà n'obi," ka Chip Rogers, onye isi na onye isi nke AHLA kwuru. “Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere nsogbu siri ike enweta enyemaka nke gọọmentị etiti ezubere iche, ụlọ ọrụ nkwari akụ ahụ enwetabeghị. Anyị kwesịrị Congress gafere bipartisan Save Hotel Jobs Act ka ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ ndị kasị sie ike kụrụ mpaghara, karịsịa obodo ndị mepere emepe, nwere ike idowe na rehire ọrụ ruo mgbe njem ina, karịsịa azụmahịa njem, na-abịa azụ tupu ọrịa etoju.
Elslọ oriri na ọ areụ seụ bụ naanị akụkụ nke ile ọbịa na ụlọ ọrụ ntụrụndụ na-anatataghị enyemaka ọ bụla n'agbanyeghị na ha so na nsogbu kacha sie ike. Ọ bụ ya mere AHLA na UNITE HERE, ndị ọrụ nnabata ndị ọbịa kacha ukwuu na North America, sonyeere oku ịkpọ Congress ka ha gafee bipartisan Save Hotel Jobs Act nke Senator Brian Schatz (D-Hawaii) na Rep. Charlie Crist (D- Flag.)
Iwu a ga-enye ndị ọrụ ụlọ oriri na ọelineụelineụ ohere, na-enye enyemaka ha chọrọ iji lanarị ruo mgbe njem, ọkachasị njem azụmahịa, na-alaghachi n'ọkwa ọrịa na-efe efe.